मंगलबार भगवान गणेशको पूजा कसरी गर्ने ? (पूजाविधि सहित) – Khabar Silo
काठमाडौं- ज्योतिष शास्त्रले मानिसको भूत, भविष्य र वर्तमानको विषयमा फलादेश गर्छ । शास्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने मानिसको जन्मबारले पनि उसको दैनिक जीवनमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । शास्त्र अनुसार कुन बारमा जन्मिएका मानिसले कस्तो पेशा/व्यवसाय गर्दा उसका लागि श्रीवृद्धि हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँ केही जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ । आइतबार: आइतबार जन्मिने व्यक्ति निकै भाग्यमानी […]
राशि अनुसार यस्तो रहनेछ तपाईंको तिहार
काठमाडौं। तिहार शुरु हुनु ४ दिन अघि अर्थात कार्तिक ०६ गते बुधबारबाट ग्रहका राजकुमार बुधको राशि परिवर्तन हुने भएको छ । यो दिन बुध रात ११ बजेर ४८ मिनटमा तुलाबाट वृश्चिक राशिमा प्रवेश गर्दैछ । कार्तिक २१ गते दिउँसो ३ बजेर ५४ मिनेटसम्म बुध उक्त राशिमा रहने छ । तिहारको प्रवेशसँगै बुधको राशि परिवर्तनले सबै […]
साङ्लो मार्ने उत्तम विधि थाहा पाउन चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिले साङ्लाको मस्तिष्कमा पुग्नेगरी शक्तिशाली न्यूरोटोक्सिनको सुई दिनुहोस्। त्यसपछि ऊ हलचल गर्न सक्दैन र तपाईँले चाहे जस्तै हुन सक्छ। दोस्रो, तपाईँले यस्को टाउकोबाट निस्किएका दुई लामा एन्टेनाजस्ता सिङमध्ये एउटा काटिदिनुहोस्। त्यसपछि खाल्टो खनेर उसलाई पुरिदिनुहोस्। त्यसपछि पनि ऊ सक्रिय नै रहन्छ। डा. ग्याभिन ब्रोड बारुलाले कसरी अरू […]